အိပျနစေဉျအတှငျးမှာ သှယျလလြှပသှားစမေယျ့ နညျးလမျး (၇) ခကျြ
HomeKnowledgeအိပျနစေဉျအတှငျးမှာ သှယျလလြှပသှားစမေယျ့ နညျးလမျး (၇) ခကျြ
ညမှာဆိုရငျ ခန်ဓာကိုယျက ကယျလိုရီ 300 နဲ့ 400 ကွားအထိ လောငျကြှမျးပါတယျ။ လောငျကြှမျးသှားတဲ့ ကယျလိုရီပမာဏက တဈနာရီပွေးလို့ ကုနျသှားတဲ့ စှမျးအငျနဲ့ ညီမြှပါတယျ။ အိပျနစေဉျအတှငျးမှာ ကိုယျအလေးခြိနျ ကသြှားအောငျ လုပျလို့မယျ့ နညျးလမျးလေးတှကေ အတျောကို လှယျကူပါတယျ။
1. ညဘကျကို အေးမွတဲ့ အခနျးအပူခြိနျမှာ အိပျပါ။
အခနျးအပူခြိနျ 18`C (64.4`F) မှာ အိပျသငျ့တယျလို့ ကြှမျးကငျြပညာရှငျတှကေ အကွံပေးကွပါတယျ။ အေးတဲ့ ပတျဝနျးကငျြက အဆီတှကေို ပိုပွီးနညျးစေ ပါတယျ။ အေးတဲ့ အခနျးထဲမှာ အိပျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျရဲ့ အပူခြိနျကို ထိနျးသိမျးထားဖို့အတှကျ စှမျးအငျတှကေို ပိုပွီးသုံးရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အေးတဲ့အခနျးထဲမှာ အိပျရငျ မနကျရောကျတဲ့ အခါ ပေါ့ပါးလနျးဆနျးနမှောပါ။
2. စပဈြသီးဖြျောရညျ သောကျပါ။
စပဈြသီးဖြျောရညျက ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ အိပျနတေဲ့အခါမှာ ခန်ဓာကိုယျအပူခြိနျကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးထားဖို့အတှကျ အဆီတှကေို အသုံးပွုရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျရာမဝငျခငျမှာ စပဈြသီးဖြျောရညျ တဈခှကျလောကျ သောကျတဲ့အခါ မလိုတဲ့အဆီတှေ ဖယျရှားပွီးသား ဖွဈမှာပါ။ စပဈြသီးဖြျောရညျသောကျတဲ့အခါ သကွားထညျ့မသောကျဖို့တော့ လိုပါတယျ။
3. အိပျရာဝငျခြိနျနဲ့ အိပျရာထခြိနျမှနျဖို့ လိုပါတယျ။
အိပျခြိနျမမှနျတဲ့ အခါ ခန်ဓာကိုယျက အလေးခြိနျ ပိုတကျလာမှာပါ။ အိပျခြိနျမှနျခွငျးက ကယျလိုရီတှေ လောငျကြှမျးဖို့ အကူအညီ ဖွဈစမှောပါ။ အိပျခြိနျမမှနျတဲ့အခါ ပငျပနျးနှမျးနယျလာပွီး ကယျလိုရီမြားတဲ့မုနျ့တှကေို စားခငျြလာပါလိမျ့မယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျခြိနျမှနျဖို့ လိုပါတယျ။
4. ညအိပျခါနီးမှာ ဖုနျး၊ tablet နဲ့ ကှနျပြူတာကို မသုံးသငျ့ပါဘူး။
ဖုနျးတှေ၊ ကှနျပြူတာတှကေ ထှကျတဲ့ အလငျးရောငျကွောငျ့ အိပျမပြျောတာတှေ ဖွဈတတျပါတယျ။Smartphoneတှရေဲ့ အလငျးရောငျက အိပျစကျမှုကို လှုံ့ဆျောပေးတဲ့ ဟျောမုနျးထှကျမှုကို နှောငျ့နှေးစပေါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ အိပျပြျောဖို့ အခြိနျယူရပွီး အိပျရာနိုးလာရငျလညျး ပငျပနျးသလို ခံစားနရေမှာပါ။ အိပျရာမဝငျခငျ2နာရီ အလိုကတညျးက smartphone ကို မသုံးသငျ့တော့ပါဘူး။ Smartphone အစား စာအုပျဖတျတာက မွနျမွနျအိပျပြျောစမှောပါ။
5. ပရိုတိနျးဓာတျပါဝငျတဲ့ မုနျ့တှကေို စားပါ။
ပရိုတိနျးဓာတျမြားမြား ပါဝငျတဲ့ ဒိနျခဉျြ၊ အဆီပါဝငျမှုနညျးတဲ့ ဒိနျခဲပြော့ ၊ အဆီနညျးတဲ့ ကွကျဆငျသား၊ မွပေဲထောပတျတို့ကို အိပျရာမဝငျခငျမှာ စားလို့ရပါတယျ။ အဲဒီအခါ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကွှကျသားတှေ တကျလာမှာပါ။
6. လကေ့ငျြ့ခနျး ပုံမှနျလုပျပါ။
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျးက စိတျဖိစီးမှုတှကေို ဖယျရှားပေးနိုငျမယျ့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးကို နစေ့ဉျပုံမှနျပွုလုပျပေးဖို့တော့ လိုပါတယျ။ရကေူးခွငျးနဲ့ အလေးမခွငျးက ညဘကျမှာ လုပျဖို့အကောငျးဆုံး လကေ့ငျြ့ခနျးတှပေါပဲ။ အဲဒီလိုလကေ့ငျြ့ခနျးတှလေုပျပွီး အိပျတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျမှာ ကယျလိုရီတှေ ပိုလောငျကြှမျးမှာပါ။
လကျဖကျခွောကျခတျထားတဲ့ ရနှေေးကို ညဘကျမှာသောကျရငျ အဆီတှေ ပိုကမြှာပါ။ စိတျမခရြတဲ့နညျးလမျးတှနေဲ့ ပွုလုပျထားတဲ့ diet လကျဖကျခွောကျတှကေိုတော့ မသောကျရငျ ပိုကောငျးပါတယျ။ သဘာဝလကျဖကျခွောကျက ကနျြးမာရေးကို ကောငျးစတေဲ့အပွငျ အဆီပိုတှေ ကစြမှောပါ။ သဈကွံပိုးခေါကျကလညျး ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးတှေ ရောငျရမျးတာကို သကျသာစမှောပါ။ ပကျပါမငျ့က အစားစားခငျြစိတျကို လြှော့ခပြေးပါတယျ။ ခြာမိုမိုငျးပှငျ့က အစာခစြေနဈကို တိုးတကျစပွေီး နာဗျကွောတှကေို ဖွလြှေော့ပေးပါတယျ။
ဒီအခကျြလေးတှကေ လှယျကူပါတယျ။ လကေ့ငျြ့ခနျးနစေ့ဉျ လုပျပွီး ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ အစားအစာတှကေို စားရငျပိုပွီး ထိရောကျပါတယျ။
အိပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ သွယ်လျလှပသွားစေမယ့် နည်းလမ်း (၇) ချက်
ညမှာဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်က ကယ်လိုရီ 300 နဲ့ 400 ကြားအထိ လောင်ကျွမ်းပါတယ်။ လောင်ကျွမ်းသွားတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏက တစ်နာရီပြေးလို့ ကုန်သွားတဲ့ စွမ်းအင်နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ အိပ်နေစဉ်အတွင်းမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ကျသွားအောင် လုပ်လို့မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေက အတော်ကို လွယ်ကူပါတယ်။
1. ညဘက်ကို အေးမြတဲ့ အခန်းအပူချိန်မှာ အိပ်ပါ။
အခန်းအပူချိန် 18`C (64.4`F) မှာ အိပ်သင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေက အကြံပေးကြပါတယ်။ အေးတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အဆီတွေကို ပိုပြီးနည်းစေ ပါတယ်။ အေးတဲ့ အခန်းထဲမှာ အိပ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက် စွမ်းအင်တွေကို ပိုပြီးသုံးရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အေးတဲ့အခန်းထဲမှာ အိပ်ရင် မနက်ရောက်တဲ့ အခါ ပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေမှာပါ။
2. စပျစ်သီးဖျော်ရည် သောက်ပါ။
စပျစ်သီးဖျော်ရည်က ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ အိပ်နေတဲ့အခါမှာ ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတွက် အဆီတွေကို အသုံးပြုရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စပျစ်သီးဖျော်ရည် တစ်ခွက်လောက် သောက်တဲ့အခါ မလိုတဲ့အဆီတွေ ဖယ်ရှားပြီးသား ဖြစ်မှာပါ။ စပျစ်သီးဖျော်ရည်သောက်တဲ့အခါ သကြားထည့်မသောက်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။
3. အိပ်ရာဝင်ချိန်နဲ့ အိပ်ရာထချိန်မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။
အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့ အခါ ခန္ဓာကိုယ်က အလေးချိန် ပိုတက်လာမှာပါ။ အိပ်ချိန်မှန်ခြင်းက ကယ်လိုရီတွေ လောင်ကျွမ်းဖို့ အကူအညီ ဖြစ်စေမှာပါ။ အိပ်ချိန်မမှန်တဲ့အခါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာပြီး ကယ်လိုရီများတဲ့မုန့်တွေကို စားချင်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ချိန်မှန်ဖို့ လိုပါတယ်။
4. ညအိပ်ခါနီးမှာ ဖုန်း၊ tablet နဲ့ ကွန်ပျူတာကို မသုံးသင့်ပါဘူး။
ဖုန်းတွေ၊ ကွန်ပျူတာတွေက ထွက်တဲ့ အလင်းရောင်ကြောင့် အိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။Smartphoneတွေရဲ့ အလင်းရောင်က အိပ်စက်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ ဟော်မုန်းထွက်မှုကို နှောင့်နှေးစေပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် အိပ်ပျော်ဖို့ အချိန်ယူရပြီး အိပ်ရာနိုးလာရင်လည်း ပင်ပန်းသလို ခံစားနေရမှာပါ။ အိပ်ရာမဝင်ခင်2နာရီ အလိုကတည်းက smartphone ကို မသုံးသင့်တော့ပါဘူး။ Smartphone အစား စာအုပ်ဖတ်တာက မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေမှာပါ။
5. ပရိုတိန်းဓာတ်ပါဝင်တဲ့ မုန့်တွေကို စားပါ။
ပရိုတိန်းဓာတ်များများ ပါဝင်တဲ့ ဒိန်ချဉ်၊ အဆီပါဝင်မှုနည်းတဲ့ ဒိန်ခဲပျော့ ၊ အဆီနည်းတဲ့ ကြက်ဆင်သား၊ မြေပဲထောပတ်တို့ကို အိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ စားလို့ရပါတယ်။ အဲဒီအခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကြွက်သားတွေ တက်လာမှာပါ။
6. လေ့ကျင့်ခန်း ပုံမှန်လုပ်ပါ။
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းကို နေ့စဉ်ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးဖို့တော့ လိုပါတယ်။ရေကူးခြင်းနဲ့ အလေးမခြင်းက ညဘက်မှာ လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းတွေပါပဲ။ အဲဒီလိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီး အိပ်တဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်မှာ ကယ်လိုရီတွေ ပိုလောင်ကျွမ်းမှာပါ။
လက်ဖက်ခြောက်ခတ်ထားတဲ့ ရေနွေးကို ညဘက်မှာသောက်ရင် အဆီတွေ ပိုကျမှာပါ။ စိတ်မချရတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ diet လက်ဖက်ခြောက်တွေကိုတော့ မသောက်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ သဘာဝလက်ဖက်ခြောက်က ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတဲ့အပြင် အဆီပိုတွေ ကျစေမှာပါ။ သစ်ကြံပိုးခေါက်ကလည်း ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတွေ ရောင်ရမ်းတာကို သက်သာစေမှာပါ။ ပက်ပါမင့်က အစားစားချင်စိတ်ကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ချာမိုမိုင်းပွင့်က အစာချေစနစ်ကို တိုးတက်စေပြီး နာဗ်ကြောတွေကို ဖြေလျှော့ပေးပါတယ်။
ဒီအချက်လေးတွေက လွယ်ကူပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းနေ့စဉ် လုပ်ပြီး ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ အစားအစာတွေကို စားရင်ပိုပြီး ထိရောက်ပါတယ်။